के तपाई उचाई (हाईट) नबढेर चिन्तित हुनुहुन्छ ? यस्तो छ, उचाई बढाउने अत्यन्तै उपयोगी ७ उपाय – Fewa Times
के तपाई उचाई (हाईट) नबढेर चिन्तित हुनुहुन्छ ? यस्तो छ, उचाई बढाउने अत्यन्तै उपयोगी ७ उपाय
प्रकाशित मिति: August 10, 2018 2:57 pm
एक निश्चित उमेर पश्चात् मानिसको उचाई बढ्न रोकिन्छ तर केही मानिसको उचाई निकै कममै सिमित हुन्छ । यदि हामीले दिनहुँ कुनै एक विशेष किसिमको योग गर्न सक्यौँ भने उचाई बढाउन सहज हुनसक्छ । यी योगलाई नियमित गर्नाले शरीरलाई एक्सरसाइज हुन्छ, जसले उचाई बढाउन एकदमै महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ । आज हामी यस्ता ७ योगको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ, जुन मध्य कुनै एक योगलाई आफ्नो दैनिक जीवनमा नियमित रूपले पालना गर्ने हो भने पनि उचाई सजिलै बढाउन सकिन्छ ।
एक खुटालाई पछाडी तर्फ तन्काउनुहोस् र दोस्रो खुट्टालाई आगाडी ९० डिग्रीको एंगलमा मोड्नुहोस् । अब मुख माथि गर्नुहोस् र दुवै हातलाई जोडेर टाउको को माथि सम्म लैजानुहोस् । १० देखि १५ पटक श्वास लिने र छोड्ने गर्नुहोस् । यस योगलाई दिनमा १० पटक दोहोर्याउनुहोस् ।
सिधा उभिनुहोस् र अब श्वास लिँदै दुवै हातलाई माथि उठाउनुहोस् र खुट्टाको औँलामा उभिनुहोस् । यस स्थितिमा ३० सेकेण्ड सम्म रोकिनुहोस् र यस योगलाई १० पटक दोहोर्याउनुहोस् ।
३.ट्री स्ट्यान्ड पोज
सिधा उभिनुहोस र दुवै हातलाई माथि उठाएर जोड्नुहोस् । अब बायाँ खुट्टालाई घुँडाबाट बोदर दायाँ खुट्टाको तिघ्रामा राख्नुहोस् । आँखा बन्द गर्नुहोस् र ८ मिनेट सम्म ध्यान गर्नुहोस् ।
सिधा उभिनुहोस् र दुवै खुट्टाको बीचमा २ फिट खाली राख्नुहोस् । दुवै हातलाई साइडमा लैजानुहोस् र दायाँ हातबाट दायाँ खुट्टालाई छुने कोशिश गर्नुहोस् । बायाँ हातलाई माथि तर्फ सिधा राख्नुहोस् । केही समय रोक्नुहोस् र फेरि सामान्य पोजिशनमा आउनुहोस् । यहि क्रिया दोस्रो हातले पनि दोहोर्याउनुहोस् ।
खुट्टालाई जोडेर सिधा उभिनुहोस् । घुँडालाई सिधा राख्नुहोस् र श्वास छोड्दै आगाडी तर्फ झुक्नुहोस् । अब दुवै हातलाई दुवै खुट्टाको पन्जाको तल राख्नुहोस् । केही सेकेण्ड्स यहि पोजिशनमा रहनुहोस् । यस योगलाई ८ देखि १० पटक गर्नुहोस् ।
खुट्टालाई नजिकै फैलाएर बस्नुहोस् । लामो श्वास लिनुहोस् र शरीरलाई पछाडी झुकाउनुहोस् । अब श्वास छोड्दै अगाडी तर्फ झुक्नुहोस् । दुवै हातले दुवै खुट्टाको औँला समात्नुहोस् र निधारले घुँडामा छुने कोशिश गर्नुहोस् । केही सेकेण्ड्स रोक्नुहोस् र फेरि पहिलेको पोजिशनमा जानुहोस् । यस योगलाई ८ १० पटक दोहोर्याउनुहोस्
पेटको बल गरेर पल्टिनुहोस् । दुवै हातलाई कम्मरको नजिक जमिनमा टेकाउनुहोस् । अब यसको सहायताले शरीरलाई माथि उठाउनुहोस् । केहि समय सम्म यहि पोजिशनमा रहनुहोस् । यसलाई १० पटक दोहोर्याउनुहोस् ।